XOG: Shir xasaasi ah oo u socda Roobow iyo NISA - Caasimada Online
Home Warar XOG: Shir xasaasi ah oo u socda Roobow iyo NISA
XOG: Shir xasaasi ah oo u socda Roobow iyo NISA
Baydhaba (Caasimada Online) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay, ayaa sheegaya in halkaasi ay gaareen wafdi ka socda Dowlada Somalia oo isugu jira Taliyayaal iyo mas’uuliyiin ka kala socta Golayaasha dowlada.
Wararku waxa ay sheegayaan in Socdaalka wafdigan uu yahay mid xal looga gaarayo arrinta Sheekh Mukhtaar Rooboow oo laba cisho un ka hor laga mamnuucay inuu isku sharaxo xilka maamulka Koonfur Galbeed.
Wafdiga arrinta Mukhtaar Roobow u gaaray magaalada Baydhabo ayaa waxaa Hogaaminaya Taliyaha Hay’adda Sirdoonka Somalia Xuseen Cismaan Xuseen iyo xubno kamid ah Golayaasha kale ee DFS.
Taliyaha Hay’adda Sirdoonka Somalia Xuseen Cismaan Xuseen iyo Mukhtaar Rooboow Abuu Mansuur, ayaa waxa uu hadda shir khaasa uga socdaa magaalada Baydhabo, waxaana banaan joog ka ah Madaxda maamulka.
Waxaa lasoo sheegayaa in kulanka intiisa badan diirada lagu saarayo sida laga yeeli lahaa arrinta Mukhtaar Roobow ee la xiriirta isu sharxida doorashada Koofur Galbeed.
Mukhtaar Rooabow ayaa lagu wargalinayaa inuu dib uga laabto ku dhawaaqidiisa Doorashada iyadoo la dhoorayo sharciga adduunka maadaama wali loo aaminsan yahay inuu yahay xubin aan cafis ka dalban shacabka.
Arrintan ayaa kusoo beegmeysa xili Wasaarada amniga Somalia ay sheegtay in Rooboow, aaney u tartami karin doorashada Koofur Galbeed, maadaama wali aanu laga wada qaadin cunaqabteyntii ay saartay Beesha Caalamka.
Lama oga sida uu arrinku noqon doono waxaana suuragal ah in mas’uuliyiinta dowlada ee gaaray magaalada Baydhabo ay go’aan ka gaaran Roobow oo u muuqda mid is adkeynaaya.